कर्णालीमा टेलिफोनबाटै विशेषज्ञ सेवा- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कर्णालीमा टेलिफोनबाटै विशेषज्ञ सेवा
जेष्ठ ८, २०७७ एलपी देवकोटा
जुम्ला — कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अस्पतालमा हुने भीडभाड कम गर्न टेलिफोनबाटै ओपीडी विशेषज्ञ सेवा सुरु गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकाले उपचार सहज बनाउन टेलिफोन विशेषज्ञ सेवा सुरु गरिएको हो ।
अस्पतालमा आउन नपर्ने र नसक्ने बिरामीका लागि यो सेवाको सुरुवात गरिएको प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले बताए । ‘अस्पतालले ओपीडी सेवामा हुने भीडभाड कम गर्न टेलिफोनमार्फत विशेषज्ञ सेवा सुरु गरेको हो,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा पनि ओपीडी सञ्चालन गरिरहेका छौं, तर सामान्य बिरामीहरु अस्पताल आउन नपरोस् भनेर यो सुविधा सुरु गरिएको हो ।’ नेपालका अन्य कुनै अस्पतालले यस्तो सेवा सुरु नगरेको उनको दाबी छ ।
अस्पतालमा इमरजेन्सी, ओपीडी र शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध छ । प्रतिष्ठानका कार्यरत कर्मचारी, बिरामी र समुदायको सुरक्षाका लागिसमेत यो सेवा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषज्ञ डा. पुजनकुमार रोकायाले बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म मोबाइल फोनबाट बिरामीलाई सेवा दिने जानकारी दिए ।
प्रतिष्ठानका अनुसार मेडिसन विशेषज्ञ डा.धीरज गुरुङ बिहान ११ देखि ४ बजेसम्म, बालरोग विशेषज्ञ डा. निराजना कास्यले बिहान १० देखि १२ बजेसम्म, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. राजीव साहले बिहान १० देखि १२ बजेसम्म सेवा दिनेछन् । सर्जरी विशेषज्ञ डा.सूर्यमान लिम्बु र इमेरजेन्सी हटलाइका लागि डा.सिद्धार्थध्वज खातीले भने २४ सै घण्टा सेवा दिने अस्पतालले जनाएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ १७:३९
संक्रमितको परिवारका ९ जनाको स्वाब संकलन
जेष्ठ ८, २०७७ राजकुमार कार्की
सिन्धुली — सिन्धुलीकी पहिलो संक्रमित महिलाको कमलामाई नगरपालिका–९ भिमान पन्नेसीको घरमा रहेका ९ जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले संक्रमित महिलाको घरमा नै पुगेर बिहीबार स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल हेटौंडा पठाएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र साहका अनुसार संकलित स्वाबको रिपोर्टका आधारमा छिमेकी चार घरका ३२ जनालाई परीक्षणको दायरामा ल्याइने छ ।
संक्रमित महिलाको पहिचान र ठेगाना खुलेसँगै भिमान पन्नेसीस्थित घर र छिमेकका ५ घरलाई बुधबार सिल गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्ने क्रममा सिन्धुलीको एक महिलामा पनि संक्रमित भएको सार्वजनिक गरेपछि कहाँको हो ? भन्ने व्यापक खोजी भइरहेको थियो । २६ वर्षीय ती महिला बुधबार बिहान काठमाडौंस्थित एपीएफ कोरोना अस्पतालमा भर्ना भएपछि सिन्धुलीको भिमानको रहेको पुष्टि भएको थियो ।
यसैबीच सिन्धुली अस्पतालमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्कर्मी, कर्मचारी, प्रहरी, जनप्रतिनिधिसहित ४७ जनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । आरडीटी परीक्षणमा एन्टीबडी पोजिटिभ देखिएपछि पीसीआर परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल हेटौंडा पठाइएको थियो । आरडीटीमा ठूलो संख्यामा एन्टीबडी पोजिटिभ देखिएपछि सन्त्रास छाएको थियो । सिन्धुली अस्पतालका प्रवक्ता डा प्रशन्न राजभण्डारीले ४७ जनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र थप ७ जनाको परीक्षणका क्रममा रहेको जानकारी दिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ १७:३३